Enye ipompo Factory - China Amanye amaphampu Abenzi, abahlinzeki
Nge ukuvezwa yayo evelele nokumelana nokusebenza kahle okuphezulu, i-KXZ chungechunge slurry futha ifaneleka ikakhulukazi ukuthuthwa slurry eqinile olwalwenza ezifana insimbi slurry kanye namalahle ukuwasha isitshalo. It is kabanzi ezimayini, yokusansimbi, amalahle, amandla kagesi, izinto zokwakha, umkhakha wamakhemikhali, ukongiwa kwamanzi neminye imikhakha.
Imikhiqizo yochungechunge lwe-KZJ isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izigayo zensimbi, ukulungiswa kwamalahle, ukuzuza nge-ore, amaphrojekthi we-alumina ne-flue gas desulfurization kanye nezinhlelo zomngcele. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukuthutha slurry olwalwenza equkethe izinhlayiya okuqinile, ezifana futha yokudla emayini, ukuthuthwa ugxilisa ahlukahlukene, tailings, ukususwa slag ezitshalweni zikagesi, ukususwa slag ezitshalweni zensimbi, ukuthuthwa kwamalahle slime ezitshalweni zokulungiselela amalahle, imidiya esindayo, njll. Ukuhlungwa kwesisindo slurry kungafinyelela ku-45% wodaka naku-60% we-ore slurry.
Lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi emikhakheni yezimboni efana nokwenza amaphepha, osikilidi, ikhemisi, ukwenza ushukela, izindwangu, ukudla, ukusansimbi, ukucubungula amaminerali, izimayini, ukuwasha amalahle, umanyolo, ukucwenga uwoyela, imboni yamakhemikhali, amandla kagesi kanye ne-elekthronikhi. Isetshenziselwa ukuhwamuka komshini, ukuvuthwa komshini, ukuvuselelwa kabusha, ukuvuthwa komshini, ukumiswa komshini, ukuncibilikisa umshini, ukuhlanza umshini, ukuphathwa kwe-vacuum, ukulinganisa kwe-vacuum, ukubuyiswa kwegesi, ukuphuculwa kwe-vacuum kanye nezinye izinqubo, okusetshenziselwa ukupompa okungenakunyakaziswa emanzini, okungenayo igesi izinhlayiya eziqinile zenza uhlelo olumpontshwayo lube igebe. Ngoba ukuncela igesi kuyabukeka ngesikhathi sokusebenza. Azikho izindawo zensimbi ezihlikihlana empompini, ngakho-ke ilungele kakhulu ukupompa igesi okulula ukufuthwa nokuqhuma noma ukubola lapho izinga lokushisa likhuphuka.
Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ekwenzeni amaphepha, osikilidi, okokwenza imithi, ushukela, izindwangu, ukudla, insimbi, ukucubungula amaminerali, izimayini, ukuwasha amalahle, umanyolo wamakhemikhali, ukucwenga uwoyela, imikhakha yezimboni zamakhemikhali njengobunjiniyela, amandla kanye ne-elekthronikhi.
● Imboni yamandla: ukususwa komfutho omubi omubi, ukufuthwa kwegesi okungafuneki
● Imboni yezimayini: igesi ekhishwayo (ipompo yokuhlanza + isihlukanisi sethangi legesi), isihlungi se-vacuum, iflothi
● Imboni ye-Petrochemical: ukuvuselelwa kwegesi, i-vacuum distillation, i-vacry crystallization, i-pressure swing adsorption
● Imboni yamaphepha: Ukumunca umswakama we-vacuum nokuphelelwa amanzi emzimbeni (isihlukanisi sangaphambi kwethangi legesi namanzi)
● Uhlelo lokuhlanza embonini kagwayi